Rehefa avy mamaky an'io dia sahy misotro kafe isan'andro ve ianao amin'ny kaopy taratasy mifono PE?
Midira ao amin'ny famolahana pulp APP ary jereo ny fomba nahatonga ny hazo ho pulp?
Taratasy kaopy plastika Zero dia nahazo mari-pahaizana momba ny zezika azo simba TÜV
Andro tsara ary manantena fa mandeha tsara ianao.
tamin'ny alàlan'ny admin tamin'ny 21-05-24
Anio dia hasehoko anao ny fampahalalana manokana momba ny indostria ho anao momba ny FBB, fantatsika rehetra fa ny vidiny (akora fototra & vidin'ny fandefasana) dia miakatra be avy eo ary hahatonga antsika roa ho ao anaty toe-javatra sarotra izany. Izahay amin'ny maha mpandraharaha lehibe an'ny APP na eto an-toerana sy any ivelany dia hanolotra anao ny vaovao indrindra amin'ny ...
1: Ny dikany PE mifono taratasy: palitao tsara ny sarimihetsika plastika PE mielona ambonin'ilay taratasy mba hamoronana taratasy mifono, antsoina koa hoe PE taratasy. 2: Ny fiasa sy ny fampiharana Raha ampitahaina amin'ny taratasy tsotra dia misy ny fanoherana ny rano sy ny menaka. Ampiasaina indrindra hanamboarana sakafo ...
Fomban-drazana PE fanodinam-batana 一 ： Fanjakan'ny fitaovana zavakanto Fanodinna 1. fanangonana 2. fanasoketana 3. fanodinana 4. fanasana 5. fanadiovana sy fametahana plastika 二 ： Fanamby 1. ampahany kely amin'ny plastika sisa azo averina ampiasaina na ampiasaina indray. 2. Ny fanodinam-bola mahomby sy mahomby ...
momba ny lipbo ningbo, mety mila mahalala zavatra ianao
Hey, azoko tsara aloha ny momba anao sy ny antony, satria ianao foana no mpanjifa farany ny taratasy teo aloha .ary misy teboka sasany eto ambany eto te-hanazava mazava aminao aho, na inona na inona raharaha ataonao aminay na tsia . 1: "NINGBO FOLD" C1S ivory board dia se ...
Taratasy pulp vita amin'ny hazo manontolo
Taratasy lava pulp taratasy vita amin'ny hazo mahazatra pulp hazo mahazatra ampiasaina amin'ny fizotry ny famokarana dia pulp fibre fohy, fa ny pulp fibre lava no ampiasainay, hery matanjaka 5 heny tsara noho ny fibre fohy! Tena henjana sy fanoherana mahery vaika fanoherana maharitra fa tsy ...
Fampidirana momba ny taratasy
FAMPIDIRANA MOMBA NY PEJY 1: Ny taratasy offset dia ampiasaina matetika amin'ny fanontana litera (offset) na milina fanontana hafa hanaovana pirinty fitaovana fanaovana pirinty miloko kokoa, toy ny gazety an-tsary, sary boky, afisy, mari-pamantarana fanontana miloko ary ...
FAMPIDIRANA MOMBA NY PAPER Ny taratasy fanampiana dia ny taratasy lehibe ampiasaina amin'ny boky fanontana fanampiana. Mety amin'ny sanganasa manan-danja, boky ara-tsiansa sy teknolojia, diary akademika ary fitaovam-pampianarana, toy ny taratasy. Taratasy fanampiana araka ny firafitry ny pa ...